XOG: Maxaa musharaxiinta mucaaradka u qorsheysan hadii uu Farmaajo u joojin waayo baaqooda ? | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG: Maxaa musharaxiinta mucaaradka u qorsheysan hadii uu Farmaajo u joojin waayo...
XOG: Maxaa musharaxiinta mucaaradka u qorsheysan hadii uu Farmaajo u joojin waayo baaqooda ?
Doorashada Soomaaliya ayaa sidii loogu talagalay u dhaqaaqi la’iyadoo uu sii idlaanayo waqtiga madaxweynaha talada haya ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn uga horyimid guddiga doorashada ay magacaabeen Ra’iisal wasaare Rooble, Qoor Qoor, Laftagareen iyo Waare.
Qoraal ay wadajir u soo saareen 12-Musharax oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayay ku sheegeen inuu madaxweynuhu doonayo inuu boobo doorashada,islamarkaana uu dib ugu soo laabto kursiga dalka si sharci daro ah.
Siyaasiyiinta mucaaradka ku soo qul qulaya magaalada Nairobi, waxayna sheegeen in Nairobi ku geli doonaan shirar ka dibna ay tegi doonaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo ay ka bilaabi doonaan kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka.
Waxay u muuqdaan musharaxiinta mucaaradka kuwo isku raacsan haddii qaabkan lagu aado doorasho inuu madaxweyne Farmaajo mar labaad ku soo laabanayo Xafiiska, waxayna ku doodayaan in guddigan aanay qaban karin doorasho cadaalad ah oo loo siman yahay,islamarkaana u raran yihiin hal dhinac, maadama ay yihiin shaqaalo Dowladeed, Saraakiil ciidan, xubno ku qoran safaarado iyo taageerayaasha madaxweynaha ee loo yaqaano ” Xoggaga Wadaniyiinta”.
Musharaxiinta mucaaradka ayaa ku taliyay in laga laabto guddiga, Haddaba haddii madaxweyne Farmaajo uu qaado hadalka mucaaradka maxay ka fekerayaan iney sameeyaan musharaxiintan?
Sida laga soo xigtay labo ka mid musharaxiinta xilka madaxweynaha, waxay musharaxiinta mucaaradka siin doonaan madaxweyne Farmaajo soo jeedin digniin wadata oo waqtiyeysan, taas oo ah inuu guddiyadan kala diro lana dhiso guddiyo la isku raacsan yahay.
Haddii uu ka dhega adeego madaxweynaha baaqaas, waxay iyaguna mucaaradka magacaabi doonaan guddi doorasho, waxayna bilaabi doonaan doorasho kale.
Labo doorasho ayaa la isku dhinac furi doonaa taas oo abuuri karta xasilooni siyaasadeed iyo amni,.
Musharaxiinta mucaaradka oo ay ku jiraan labo madaxweyne hore, Ra’iisal wasaare hore, labo madaxweyne goboleed oo hore, Wasiir hore iyo Xildhibaano ayaa u muuqda iney u diyaargarowbayaan dagaal siyaasadeed oo aan waxba la isku reeban.
Previous articleGuddoomiye Mursal oo magacaabay Guddi soo diyaariya saameynta Covid19 ku yeeshay dalka
Next articleDhageyso Dadka Biraha ka sameeya Alaabta kala duwan ee ku sugan Magaalada Baydhabo Oo Dalbaday Maalgelinta Xirfadooda.